कोरोनाको बढ्यो त्रास ! कोरोनाबाट काठमाडौंमा ५ को मृ त्यु – Bannigadhi Today
कोरोनाको बढ्यो त्रास ! कोरोनाबाट काठमाडौंमा ५ को मृ त्यु
धनराज साउँद २०७७ असार २८, आईतबार १५:५४
काठमाडौं – संघीय राजधानीमै कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण हालसम्म ५ जनाको मृ त्यु भएको छ । पछिल्लोपल्ट काठमाडौंमा उपचाररत मिर्गौला रोगका २ बिरामीसहित सिन्धुपाल्चोकका १ पुरुषको मृ त्यु भएको हो । यससँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसबाट मृ त्यु हुनेको संख्या ३८ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमका अनुसार, काठमाडौं— १० शंखमूलका ६० वर्षीय पुरुषको असार २६ गते निध न भएको हो । फोक्सोमा पानी जमेको र मिर्गौला रोगको कारणले अस्पताल भर्ना भएको १० दिनपछि उनको ज्यान गएको हो । उनीे असार १६ गते पाटन अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । उनको असार १७ गते स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ४ का ५४ वर्षीय पुरुषको असार २५ गते उपचारका क्रममा मृ त्यु भएको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा उनको मृ त्यु भएको हो । उनी मिर्गौला रोगका बिरामी थिए । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनलाई काठमाडौं मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको थियो । श्वासप्रश्वासमा पनि समस्या देखिएको थियो । उनको असार २१ गते स्वाबको नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको थियो । काठमाडौं नयाँ बानेश्वरका ८५ वर्षीय वृद्धको पनि कोरोना भाइरसका कारण गत असार १७ गते ज्यान गएको थियो । उनी उच्च रक्तचाप र पार्किन्सनका बिरामी थिए । छातीको समस्यापछि अस्पताल पुगेका उनको उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो । उनको पनि मृ त्युपछि १९ असारमा कोरोनाको पुष्टि भएको थियो । यसअघि ललितपुरमा २ जनाको कोरोना भाइरसबाट मृ त्यु भएको थियो । ललितपुर, बुङमतीका ५६ वर्षीय पुरुषको जेठ १४ गते निधन भएको थियो । उनी १२ जेठमा किस्ट अस्पताल भर्ना भएका थिए । मृ त्युपछि १५ जेठमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
त्यस्तै ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका– ५ का पुरुषको पनि मृत्यु भएको थियो । पाँच महिनाअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण भएका उनी नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । उपचारकै क्रममा उनलाई पाटन अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो । उनको असार ११ असारको बिहान मृ त्यु भएको थियो । यससँगै काठमाडौं उपत्यका निवासी ५ जनाको कोरोना भाइरसको कारण ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पाँचपोखरी— ६ का ४५ वर्षीय पुरुषको मृ त्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । उनको उपचारका क्रममा २५ असारमा पाटन अस्पतालमा निधन भएको डा। गौतमले जानकारी दिए । असार १८ गते क्षयरोगको उपचारका लागि उनी पाटन अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । उपचारका क्रममा कोरोना स्वाब परीक्षण गर्दा उनमा असार २२ गते कोरोना पोजेटिभ पाइएको थियो ।
विगत २४ घण्टामा मुलुकमा थप ७४ जना कोरोना भाइरसका नयाँ बिरामी फेला परेका छन् । यो वृद्धिसँगै मुलुकभर पुष्टि भएका कोरोना संक्रमितको संख्या १६ हजार ७ सय १९ पुगेको छ । कोरोना संक्रमणबाट निको भएर फर्कनेको संख्या ८ हजार ४ सय ४२ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल विभिन्न आइसोलेसनमा उपचाररत ८ हजार २ सय ३९ जना छन । त्यस्तै क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या २ हजार ४ सय ९७ छ । अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखिएको छ ।